Hello Nepal News » रोनाल्डो सिरी ए लिगको सर्वाधिक गोलकर्तामा उक्लिए : यस्तो छ ताजा स्थिति
रोनाल्डो सिरी ए लिगको सर्वाधिक गोलकर्तामा उक्लिए : यस्तो छ ताजा स्थिति
इटालियन क्लब युभेन्टसका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो जारी सिजन २०२०–२१ अन्तर्गत घरेलु सिरी ए लिगको सर्वाधिक गोलकर्ताको शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन् । गत राति युभेन्टसले अवे मैदानमा उडिनेसलाई १–४ ले हराउनेक्रममा २ गोल गरेपछि रोनाल्डो कूल १४ गोलसहित लिगको एक सर्वाधिक गोलकर्तामा उक्लिएका हुन् ।
नयाँ वर्ष २०२१ को पहिलो खेलमै उडिनेसविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै रोनाल्डोले २ गोल तथा १ गोलमा असिस्टसमेत गरेका थिए । उनी खेलको म्यान अफ् द म्याच पनि घोषित भए । उडिनेसविरुद्धको खेलअघि रोनाल्डो र इन्टर मिलानका रोमेलु लुकाकुको नामम समान १२–१२ गोल थियो । तर, उनिडेसविरुद्ध २ गोल गरेसँगै रोनाल्डो अब एकल रूपमा लिगमा सर्वाधिक गोलकर्ताको लिड गरिरहेका छन् ।
जारी सिजन उत्कृष्ट लयमा रहेका रोनाल्डोले मात्रै ११ खेलबाट १४ गोल गरेका हुन् । उनले लिगमा हालसम्म ३ असिस्ट गरेका छन् । केही समयअघि सर्वाधिक गोलमा एसी मिलानका ज्लाटन इब्राहिमोभिचसँग रोनाल्डोको प्रतिस्पर्धा थियो । तर, ज्लाटन घाइते भएपछि रोनाल्डोले उनलाई पछि पारेका हुन् । अहिले रोनाल्डोसँग लुकाकुले सर्वाधिक गोलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस्तो छ लिगमा सर्वाधिक गोलकर्ताको ताजा स्थिति–
१. क्रिस्टियानो रोनाल्डो – १४ गोल (११ खेल)
२. रोमेलु लुकाकु – १२ गोल (१४ खेल)
३. सिरो इम्मोबिले – १० गोल (१३ खेल)
४. ज्लाटन इब्राहिमोभिच – १० गोल (६ खेल)
प्रकाशित मिति २० पुष २०७७, सोमबार १३:५९